रोक्दा रोक्दै भेरीमा महिला हा,xम फा,xले,xप,xछि… – Khabar Patrika Np
बोन क्यान्सरबाट पीडित ९ वर्षीया छोरी बचाउन सहयोगको अपिल !
कुटपिट बाट युवकको मृ,त्यु,
रोनाल्डो र मेसि जत्तिकै फुटबल कला भएका विकास मेराग्लिया को हुन् ? नेपालबाट किन खेल्दैनन् ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: ११:०७:२७
भेरी नदिमा एक जना महिलाले हा,xम फा,xले,xकी छिन् । उनले भेरी नदिको किनारामा आफ्ना कपडा, मोबाइल र चेक लगायतका सामान छोडेर उर्लिएको भेरीमा हाम फाल्न पुगिन् ।
बिहीबार बिहानदेखि कर्णालीमा वर्षा भईरहेको छ। जसले गर्दा पानीको बहाव बढ्दा भेरी नदी उर्लिएको छ । दिउँसो झण्डै साढे २ बजेतिर त्यहाँ काम विशेषले पुगेकी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले टाढैबाट उनलाई रोक्न खोज्दा खोज्दै ती अपरिचित महिला नदीमा हा,xम फा,xले,xको बताइन् ।
उनले भनिन,‘नदी किनारामा उनका केही कागज र कपडा छन् । प्रहरी नपुग्दासम्म हामीले हेर्न मिलेन। प्रहरीलाई खबर गरेका छौँ ।’ प्रहरीका अनुसार अहिले प्रहरी घटनास्थलमा पुगिसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले महिला नदीमा बेपत्ता भएको र उनी को हुन् भन्नेबारे सोधखोज भइरहेको बताए ।
यो पनि पढ्नु हाेस
घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ । कालो कमिला आउदा आर्थिक समृद्धि हुनुको साथै सुख मिल्ने बताईन्छ ।त्यस्तै घरमा रातो कमिला आवत जावत गर्छ भने त्यसले घरमा केही अशुभ हुने र परिवारमा तनाव बढ्ने संकेत गर्दछ ।
कमिलालाई के खुवाउँदा शुभ:कमिलालाई रोटी अथवा चिनी खुवाउँनु निकै शुभ मानिन्छ । कमिलाई चामलको रोटीमा शख्खर मिसाएर खान दिदा भाग्योदय हुन्छ र परिवारमा शान्ति मिल्छ ।यदी हरेक काममा उल्झन आईरहेको छ भने कमिलालाई चिनीमा नरिवलको धुलो मिलाएर खुवाउनुपर्छ ।यस्तै बदामको धुलोमा चिनी मिसाएर दिदा तनाव हट्ने र ब्यापार ब्यवसायमा प्रगती हुने बताईन्छ ।
यदि राशीमा शनि दोष छ भने कमिलालाई चनाको रोटीमा चिनी मिसाएर दिदा शुभ हुन्छ । यस्तै राहुको दशा चलिरहेको छ भने कमिलालाई चिनी दिदा शुभ हुन्छ ।यदि तपाईको सुर्य कमजोर छ भने आईतबारको दिन कमिलालाई खिर बनाएर दिदा शुभ हुन्छ । यदि कुण्डलीमा पितृ दोष छ भने कमिलालाई अमावस्यको समयमा आफुले खाने खानेकुराको केही अंश कमिलालाई खुवाउनुपर्छ ।
गृह दोष दुर गर्नको लागि कमिलाई गुलियो रोटी खुवाउद शुभ हुन्छ । साथै लक्ष्मी पनि खुसी हुन्छिन् ।यसैगरी सपनामा कमिला देख्दा धन लाभ हुने बताईन्छ । तर अधिक मात्रामा कमिला देखे जीवनमा चिन्ता बढ्ने संकेत गरेको मानिन्छ । घरमा आएको कमिलालाई मार्नु दुर्भाग्य हुने समेत ज्योतिषमा बताईएको छ ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, आज ०९ गते । मंगलबारको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल राशिफल
कस्तो रहला यहाँको ,भोलि कार्तिक ०९ गते मंगलबारको राशिफल, हेर्नुहोस्
सुत्नु अघि सुपा देउराली माइको दर्शन गरी हेर्नुहोस भोलि कार्तिक ०९ गते मंगलबारको राशिफल
कार्तिक ०९ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
जैतुन र ब्रो काउली खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
तामाको भाडाको पानी कसरी पिउँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ?